Qaasim Soleimani: Trump oo sheegay in weerrarkii cirka uu ahaa mid 'dagaal lagu joojinaayay' - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu u dilay hogaamiyihii sare ee milateriga Iiraan, Qaasim Sulaymaani, si "uu u joojiyo dagaal, ee uusan doonayn inuu mid bilaabo".
Waxa uu sheegay in uu "dhammaaday waqtigii argaxa ee Sulaymaani" kaddib markii Jimcihii lagu dilay weerrar dhanka cirka ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Trump ayaa u qiildayay dilka, isagoo sheegay in janaraalku uu qorshaynayay weerraro ka dhan ah danaha Mareykanka.
Sulaymaani ayaa madax ka ahaa howgallada Iiraan ee Bariga Dhexe oo waxa uu hogaamin jiray ciidammada Qudus. Iiraan ayaa waxa ay wacad ku martay in "si adag uga aargoosan doonto" kuwii ka dambeeyay geeridiisa.
Maxaa ka dhalan karo dilka Suleymaani, maxaase hadda loo dilay?
Safiirka Iiraan u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Tahraan ay xaq u leedahay in ay is difaacdo iyadoo adeegsanaysa shuruucda caalamiga ah.
Maanta oo Sabti ah waxaa magaalada Baqdaad tacsi loogu qaban doonaa Janaraal Sulaymaani, iyadoo maydkiisana loo duulin doono waddanka Iiraan si halkaas loogu aaso.
Image caption Pentagon-ka ayaa xaqiijiyay in ciidammada Mareykanku ay dileen Janaraal Sulaymaan
Gudaha dalka Iran waxaa uu Qaasim Suleeymaani ka ahaa geesi qaran balse Mareykanka ayaa Janaraal Suleeymaani iyo ciidamadiisa Qudus waxay u yaqaaneen argagixiso.
Safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa weerrarka kaddib muwaadiniinta Mareykanka ku boorrisay iney ''sida ugu dhakhsiyaha badan uga baxaan dalka Ciraaq''.
Waxaana haatan la sheegayaa in qaar ka mid ah muwadiniinta Mareykanka ay bilaabeen iney isaga baxaan dalkaasi iyagoo oofinaya baaqa safaaradooda.
Israa'iil ayaa iyana la shegeyaa iney milaterigeeda heegan galisay.
Image caption Hogaamiyihii sare ee milateriga Iiraan, Qaasim Sulaymaani, ayaa waxaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo Jimcihii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey, Antonio Guterres, ayaa sheegay in dunida aysan haatan xamili karin dagaal kale oo qarxa gacanka Carbeed.
Dhanka kale Telefishinka qaranka ciraaq ayaa sheegaya in uu weerar kale oo dhacay 24 sacadod kaddib weerrkii lagu dilay Suleymaani balse ilaa haatan ma jirto jawaab ka soo baxday xukuumadda Washington.
Telfishinka ayaa sheegay in Mareykanka uu bartilmaameedsaday kolonyo gawaari ah oo ay leeyihiin maleeshiyo ay Iiran baritaarto oo ku sugan waqooyiga magaalada Baqdaad, waxaana la sheegay iney halkaasi ku burburiyeen labo baabur ugu yaraan lix qofna waa ay ku dhinteen.
Waxaa jira warar sheegaya in la bartilmaameedsaday hogaamiyaha maleeshiyaad kale hasayeeshee afhayeen ayaa sheegay in la garaacay gawaari sidday saad caafimaad ee aanan la weerarin kolonyo milateri.
Image caption Holaca ka baxaya burburkii uu ka tagay weerrarkii ka dhacay bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha ee Baqdaad